उपयुक्त समयमा रोनाल्डो बेचेको रियल मड्रिडको निष्कर्ष, नेयमार नल्याई नछोड्ने ! – Medianp
उपयुक्त समयमा रोनाल्डो बेचेको रियल मड्रिडको निष्कर्ष, नेयमार नल्याई नछोड्ने !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, असार २७, २०७५१८:०८0
काठमाडौं, २७ असार । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई उपयुक्त समयमा बेचेको बताएको छ । रोनाल्डो मंगलबार मात्रै ८८ मिलियन पाउण्डमा इटालियन क्लब युभेन्टस जाने टुंगो लागेको थियो । २००९ मा म्याचनचेस्टर युनाइटेडबाट ८० मिलियन पाउण्डमा रियलले रोनाल्डोलाई अनुबन्ध गरेको थियो र उसले ९ बर्षपछि ८ मिलियन पाउण्डमा उसलाई बच्यो । यो नै रोनाल्डो बेच्ने उपयुक्त समय भएको रियलको ठहर छ ।
रोनाल्डोलाई बेचेपछि रियलले पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)का स्टार नेयमारलाई भित्र्याउन ध्यान केन्द्रीत गरेको बताइएको छ । नेयमार गत सिजनमा विश्वकिर्तिमानी रकममा रियलको चिरप्रतिद्वन्दी क्लब बार्सिलोनाबाट पिएसजी गएका थिए ।
रियलका अध्यक्ष पेरेज रोनाल्डोलाई रिप्लेस गर्न सक्ने खेलाडी नेयमार भएकोमा विश्वस्त छन् । उनी आफै पनि नेयमारका फ्यान भएको बताइन्छ । पेरेजले नेयमारलाई जसरी पनि भित्र्याउने योजना बनाएका छन् । यदी नेयमारलाई भित्र्याउन नसके पेरेजले चेल्सीका इडेन हार्जाडलाई भित्र्याउने अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
खाने होइन त सिंहसँग बसेर डिनर ?
राजधानीका तीनै जिल्लामा दिउँसो टिपर चलाउन प्रतिबन्ध
ग्यारेथ बेलका लागि भिनिसियस चुनौती ! नयाँ सिजनमा रियल छोड्दै